true tone-scale /zu-ZA/tools-for-life/tone-scale/steps/the-emotional-tone-scale.html read 3 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/tone-scale_zu_ZA.jpg I-Emotional Tone Scale
Ukuqaphela isenzo sokuqaphela noma ukubhekela izinto eduze. Yinto oyenza nsuku zonke, kepha ngoba amehlo akho abheke kokuthile akusho ukuthi usukuqaphele ngempela. Ukuqaphela kufaka phakathi ukucwaningisisa kakhulu kwalokho okuqaphelayo, futhi lapho ubheka ukuthola i-emotional tone yomuntu, ukuqaphela kuphela okudingayo ukwazi ngokuqondile ukuthi ukuphi ku-Emotional Tone Scale.
I-Tone Scale iyithuluzi eliwusizo kakhulu ukusiza ukuqagela ukuthi umuntu uzoziphatha kanjani nokuthi uzokwenzanjani. Kepha ukwenza lokhu kahle, kufanele ukhone ukuqaphela ngokuqondile futhi ubone indawo yomuntu esikalini ngokumbheka nje kafushane.
I-Tone Scale kulula kakhulu ukuyisebenzisa lapho umuntu ezwakala kakhulu noma esobala ngesimo sakhe se-emotional.
Ukwenza isibonelo, ungasho ukuthi umuntu othile ubenentukuthelo izolo ngoba lomuntu uqale wamemeza waphonsa incwadi ngaphesheya kwekamelo. Lokho kulula. Noma ake sithi wabona u-Mariya ehla izinyembezi. Ngokusobala lokho kulula ukukubona njenge emotional tone yosizi.
Kepha kunjani ngezinga le-tone yomuntu esikhathini eside. Lokhu akuyona imikhuba emihle ejwayelekile nezimpendulo umuntu azifundayo, njengokuphendula ngokuthi “ngiyaphila” lapho ebuzwa ukuthi uqhuba kanjani. Lokho kubizwa ngokuthi i-tone yobuntu. Ubuntu, kulokhu kusetshenziswa, kusho indlela abantu emaqenjini abaziphatha nabenza ngayo lapho bendawonye. I-tone yobuntu bomuntu incike emfundweni yakhe nasekuziphatheni akufundile kubangane bakhe noma emndenini lokho akusebenzisayo ukuzethula kwabanye. Ngakolunye uhlangothi, ngemuva kwe-tone yobuntu bomuntu kunezinga le-tone yakhe uqobo—leyo akuyona empilweni yakhe yansuku zonke. Ngokuzijwayeza, ungabona ngale kwe-tone yobuntu futhi uqaphele izinga langempela le-tone yomuntu.
Ukwenza kanjani lokhu? Ukwenza ngokuphela kwendlela obona ngayo noma iyiphi into: ukuqaphela okusobala. Ubheka okuthile nje lokho okuyikho, lokho okukhona ngempela. Ikhono lokubona okusobala lilula ukulifunda.
Umfundisa kanjani umuntu othile ukubona lokho okukhona? Enye indlela ukubeka okuthile okufanele akubheke bese uthi akutshele akubonayo. Umuntu angakwenza lokhu ngokwakhe noma neqembu, njengesigaba. Ngokwakhe, angamane akhethe umuntu noma into ethile bese eqaphela lokho okukhona.
Uthisha ofuna ukufundisa abafundi ukuthi baqaphele angacela omunye wabafundi ukuthi asukume phambi kwekamelo bese abanye abafundi bembheka. Uthisha umi lapho bese ebuza abafundi:
Impendulo yokuqala ingaba yinto efana nale:
“Ngiyabona ukuthi uthole isipiliyoni esiningi.”
“O, uyakwazi? Uyakwazi ukubona isipiliyoni sakhe? Ubonani lapho?”
“Yebo, Imibimbi ezungeze amehlo nomlomo wakhe iyabonisa sekathola isipiliyoni esiningi.”
“Kulungile, kodwa ubonani?”
“O, ngiyathola. Ngibona imibimbi izungeze amehlo nomlomo.”
Uthisha akamukeli lutho olungabonakali ngokusobala.
Umfundi uqala ukubamba athi, “Impela, ngiyabona ngempela ukuthi unezindlebe.”
“Kulungile, kepha kusuka lapho uhleli khona, uyakwazi ukuzibona zombili izindlebe njengoba umbhekile manje?”
“Ngiyabona ukuthi unendlebe yesokunxele.”
Akunakucabangela noma imibono ezosebenza—kuphela lokho okubonwa iso.
Lokho ozama ukukufeza ngale-drill ukufunda nje ukuqaphela okusobala. Okokusiza ukuthi ufike ephuzwini lapho ungabheka khona omunye umuntu, noma into, ubone kahle ukuthi yini lokho okukhona. Hhayi isinqumo sokuthi kungaba kukhonani lapho. Ukuthi yini ekhona, esobala futhi ecacile esweni lapho ubheka.
Lena i-drill ongayenza wedwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma ngabe ukuphi, usebhasini noma esitimeleni, endaweni yokudlela, emigwaqweni noma emsebenzini.
Lokho umuntu akwenzayo ngamehlo akhe kungakusiza ubone indawo akuyo ku-Tone Scale.
Ungathola umbono omuhle ngezinga le-tone lomuntu uqobo ngokubheka akwenzayo ngamehlo akhe.
Onganaki, uzokwenza sengathi ubheke ngqo entweni ethile imizuzu ethile engapheli. Into kuphela ukuthi, akaboni ngisho nalokho. Akayiboni leyonto ngempela. Uma uphonsa isikhwama phezu kwekhanda lakhe, lapho amehlo akhe abheke ngakhona azohlala enjalo.
Usizi, umuntu ubukeka edabukile futhi uvame ukuqondisa amehlo akhe phansi esikhathini esiningi.
Ngokwesaba, umuntu akakwazi ukukubheka. Abantu bayingozi kakhulu ukubabheka. Kuthi esathi ukhuluma nawe, kepha ebheke le ngakwesobunxele. Ngemuva kwalokho ubheka izinyawo zakho kancane, bese phezu kwekhanda lakho (uthola umcabango wokuthi indiza indiza phezu kwenu nobabili), kepha manje usebheke emuva ehlombe lakhe. Ubheka lapha futhi abheke laphaya, ukusuka endaweni kuya kwenye. Uzobheka noma kuphi kodwa hhayi kuwe.
Bese, onentukuthelo, uzobheka ngokucophelela kude nawe ngombono wokungafuni ukuxhumana nawe. Lapho umuntu ephakeme kancane ku-Tone Scale, uzobheka ngqo kuwe, kepha hhayi ngokujabula. Ufuna ukukubona njengento yokubhekisa ukucasuka kwakhe kuyo, ikakhulukazi uma ethukuthele.
Bese-ke, ngesizungu, amehlo omuntu ayobe ezulazula futhi, kodwa hhayi ngokushesha noma ukukhathazeka njengokwesaba. Futhi, uzobe engakugwemi ukukubheka. Uzokuhlanganisa kanye nezinto azibukayo.
Ngale datha, nokuba nekhono lokubona abantu, ungaqubuka uzijwayeze out ezindaweni zomphakathi lapho kunabantu abaningi. Qala ukukhuluma nabantu ongabazi. Vele ubamise bese ubacela izinkomba noma okuthile. Ungakwazi ukubona ngokushesha izinga lomuntu ngamunye ku-Tone Scale. Lokhu kwenziwa ukuze uzijwayeze futhi uthuthukise ikhono lakho.
Indlela engcono yokwenza lokhu ukuthi ube nochungechunge lwemibuzo ukubuza umuntu ngamunye kanye ne clipboard ukubhala izimpendulo, amanothi, njll. Kufana nokuthi wenzela othile inhlolovo, kepha i-purpose yangempela yokukhuluma nabantu ukubona amazinga abo ku-Tone Scale—ukuthola kahle imisindo yabo kanye nezimpawu zabo zenhlalo. Ungahlela imibuzo ethile ubabuze yona ezobhoboza ukuqeqeshwa kwabo kobuntu kanye nemfundo ukuze ama-tone abo oqobo abonakale.
Nansi eminye imibuzo eyisibonelo esetshenziswa kule drill:
“Yini into esobala kakhulu ngami?”
“Ugcine nini ukugunda izinwele zakho?”
“Ngabe ucabanga ukuthi abantu benza umsebenzi omningi manje njengoba benzile eminyakeni engamashumi amahlanu edlule?”
Ekuqaleni, wenza lokhu nje ukubona i-tone yomuntu omhlolayo—futhi ziningi izinto ezenzekile lapho wenza lokhu!
Kamuva, njengoba uthola ukuzethemba ngokuvimba abantu ongabazi futhi ubabuze imibuzo, le miyalo iyathayiselwa:
“Xoxa okungenani nabantu abayishumi nanhlanu. Ngamunye kwabahlanu bokuqala, hlanganisa i-tone yakhe ngokushesha nje lapho usuyibonile. Abalandelayo abahlanu, uphonsa phansi ama-tone abo oqobo bese ubuza imibuzo futhi ubone ukuthi kwenzekani. Bese, kubantu abahlanu abahloliwe, ufaka i-tone ephakeme ukwendlula eyabanye.”
Isibonelo, masithi umuntu okhuphukela kuye uthi ngolaka, “Impela, ngizophendula imibuzo yakho—kuzofanele ngilinde iloli lokudonsa ngoba isilima semoto yami sephukile!”
Ukuqhathanisa ne-tone yakhe yokuthukuthela, nawe ungaphendula, ngezwi elinolaka, “Kanti kunjani emhlabeni namuhla ngabantu abenza izimoto ezephukayo! Abasawenzi umsebenzi omuhle njengoba kade benza!”
Bese uqhubeka, uqhathanisa i-tone lakhe njengoba ubuza imibuzo.
Yini umuntu angayithola kulezi zivivinyo? Okokuqala, ungakhulisa ikhono lakho lokuxhumana nanoma ubani.
Ekuqaleni, umuntu angahle akhethe uhlobo lwabantu alumisayo. Ungahle ume futhi ukhulume nezalukazi kuphela, noma uqaphele ukuthi ungakhulumi namuntu obukeka ethukuthele noma ukhuluma kuphela nabantu ababukeka behlanzekile. Kepha ngemuva kokwenza le-drill isikhashana, uzovele umise umuntu olandelayo, noma ngabe kubukeka sengathi unesifo esibi futhi angaba yingozi impela.
Ikhono lakho ukuqaphela abantu liyakhula futhi umuntu ongamazi uba nje ngomunye umuntu ongakhuluma naye. Uyazimisela ngempela ukubona kanye nokubeka umuntu ku-Tone Scale ngaphandle kokuphazamiseka noma ukungabaza.
Ungaze ube muhle ekubuzeni imibuzo ku-emotional tone ngayinye futhi uxhumane ngokuzethemba, okuwusizo olukhulu empilweni. Futhi kumnandi kakhulu ukukwenza.
Ukhona ukubona amazinga we-tone wabantu ngokubabuka nje kuyikhono elikunika omkhulu umfutho ekusebenzeni kwakho nabanye. Kuyikhono elisifanele isikhathi nomzamo.